ANALOGS NATORRENT - UTORRENT - 2019
Mgbe ị na-etinye ma ọ bụ na-agba ọsọ ụfọdụ ngwa si ụlọ ahịa Google Play, njehie na-eme mgbe ụfọdụ "Ọ bụghị na obodo gị". Ejikọtara nsogbu a na atụmatụ mpaghara nke ngwanro na enweghị ike izere enweghị ego ọzọ. Na ntuziaka a, anyị ga-atụgharị uche na-emechi ihe mgbochi dị otú ahụ site na ngbanwe nke ozi netwọk.
Njehie "Ọ bụghị na obodo gị"
Enwere otutu ngwọta maka nsogbu ahụ, ma anyị ga-agwa naanị banyere otu n'ime ha. Usoro a kachasị mma n'ọtụtụ ọnọdụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-eme ka a rụpụta ihe dị mma karịa ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 1: Wụnye VPN
Mbụ ị ghaghị ịchọta ma wụnye VPN maka gam akporo, nhọrọ nke taa nwere ike ịbụ nsogbu n'ihi ụdị dị iche iche. Anyị ga-aṅa ntị nanị na otu ngwanrọ free na nke a pụrụ ịdabere na ya, nke enwere ike ibudata site na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Gaa na Hola VPN na Google Play
Download ngwa site na peeji nke na ụlọ ahịa na iji bọtịnụ "Wụnye". Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị imeghe ya.
Na mmalite peeji nke, họrọ ụdị software ahụ: akwụ ụgwọ ma ọ bụ n'efu. N'okwu nke abụọ, ọ ga-adị mkpa ka ị gafee usoro ị ga-akwụ ụgwọ.
Mgbe ị gwụchara mmemme mbụ ahụ ma si otú a kwadebe ngwa maka ọrụ, gbanwee mba ahụ dịka atụmatụ mpaghara nke software dị na enweghị. Pịa ọkọlọtọ na igbe nchọta wee họrọ mba ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, iji nweta ngwa Spotify, nhọrọ kasị mma bụ United States.
Site na ndepụta nke ngwa arụnyere, họrọ Google Play.
Na windo nke mepee, pịa "Malite"iji mepụta njikọ na ụlọ ahịa ahụ site na iji data netwọk gbanwere.
A ghaghị ikwenye njikọ ọzọ. Usoro a nwere ike nyochaa zuru ezu.
Biko mara, nhọrọ Hola n'efu nwere oke nkenke banyere njirimara na usoro nke ọrụ enyere. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịmara onwe gị na onye ndu ọzọ na saịtị anyị maka ịmepụta VPN iji ihe atụ nke ngwa ọzọ.
Hụkwa: Otu esi edebe VPN na gam akporo
Nzọụkwụ 2: Dezie Akaụntụ
Na mgbakwunye na ịwụnye na ịhazi ndị ahịa VPN, ịkwesịrị ime ọtụtụ mgbanwe na ntọala akaụntụ Google gị. Ịga n'ihu na akaụntụ ahụ aghaghị itinye otu ụzọ ma ọ bụ karịa usoro ịkwụ ụgwọ site Google Pay, ma ọ bụghị na ozi ahụ agaghị arụ ọrụ.
Hụkwa: Otu esi eji ọrụ akwụ ụgwọ Google
Gaa na menu isi nke Google Play ma gaa "Ụzọ ịkwụ ụgwọ".
Lee na ala nke ihuenyo pịa njikọ ahụ "Ntọala ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ".
Mgbe ịchọrọ redirection na Google Pay website, pịa akara ngosi na aka ekpe aka ekpe ma họrọ "Ntọala".
Gbanwee nkeji "Mba / Mpaghara" ma "Aha na adreesị" nke mere na ha na-agbaso iwu Google. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịmepụta profaịlụ ntanetị ọhụrụ. N'ọnọdụ anyị, a na-ahazi VPN maka United States, ya mere data ga-abanye dị mma:
Mba - United States (US);
Nke mbụ nke adreesị ahụ bụ 9 East 91st St;
Ahịrị nke abụọ nke adreesị ahụ bụ ịgba ọsọ;
Obodo - New York;
State - New York;
Ị nwere ike iji data anyị wepụtara ma e wezụga aha ahụ, nke bụkwa ihe na-achọsi ike ịde na Bekee, ma ọ bụ ma ọ bụ ma ọ bụ na ịgha ụgha ihe niile onwe gị. N'agbanyeghị nhọrọ, usoro ahụ dị mma.
Usoro a nke mgbazi nke njehie a tụlere nwere ike mechaa ma gaa n'ihu. Otú ọ dị, na mgbakwunye, echefula iji nlezianya tụlee data niile iji zere ịmegharị ntụziaka.
Nzọụkwụ 3: Kọwaa Google Play Cache
Nzọụkwụ ọzọ bụ iwepu ozi gbasara mmalite ọrụ nke ngwa Google Play site na mpaghara pụrụ iche nke ntọala na ngwaọrụ gam akporo. N'otu oge ahụ, onye ekwesịghị ịbanye n'ahịa n'ejighị VPN iji mee ka ọ ghara inwe nsogbu ahụ.
Mepee usoro nke usoro "Ntọala" na na ngọngọ ahụ "Ngwaọrụ" họrọ ihe "Ngwa".
Tab "Ihe niile" pịgharịa gaa na ibe ma chọta ọrụ ahụ "Ụlọ Ahịa Google".
Jiri bọtịnụ "Kwụsị" ma gosipụta njedebe nke ngwa ahụ.
Pịa bọtịnụ ahụ "Ghichapụ data" ma Clear Cache n'ụzọ ọ bụla dị mma. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nhicha ahụ ga-ekwenye.
Malitegharịa ekwentị gam akporo gị na, mgbe ị gbanyechara, gaa Google Play site VPN.
Nke a bụ nke ikpeazụ, n'ihi na mgbe omume gị mechara, ngwa niile sitere na ụlọ ahịa ahụ ga-adị gị.
Nzọụkwụ 4: Nweta ngwa ahụ
N'akụkụ a, anyị ga-atụle naanị akụkụ ole na ole na-enye anyị ohere ịnwale arụmọrụ nke usoro a tụlere. Malite site na ịlele ego. Iji mee nke a, jiri nyocha ahụ ma ọ bụ njikọ ahụ iji meghee akwụkwọ ahụ na ngwa akwụ ụgwọ ma lelee ego nke eji ngwaahịa ahụ.
Ọ bụrụ na kama nke rubles, dollar ma ọ bụ ego ọzọ na-egosipụta dịka mba ahụ akọwapụtara na profaịlụ na ntọala VPN, ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma. Ma ọ bụghị ya, ị ga-enyocha okpukpu abụọ na imegharị omume ahụ, dịka anyị kwuru na mbụ.
Ugbu a ngwa ga-egosipụta na nchọta ma dị maka ịzụta ma ọ bụ ibudata.
Dị ka ihe ọzọ dị iche iche a tụlere, ị nwere ike ịnwa ịchọta ma budata ngwa ahụ, ejedebe na Play Market site na mpaghara mpaghara, n'ụdị faịlụ APK. Ihe kachasị mma nke ngwanrọ na ụdị a bụ wdgvbgddddddddgd.com, ma nke a anaghị ekwenye na mmemme nke usoro ihe a.